''အကယ်ဒမီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တွေ အများကြီး ကြိုးစားဖို့ လိုပါသေးတယ်'' ဆုမြတ်နိုးဦး - Yangon Media Group
ကိုယ့်အတွက် လုပ်ကွက်ရခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေရှိပေမယ့်လည်း အကယ်ဒမီကိုတော့ မမျှော်မှန်းရဲပါဘူးလို့ သရုပ်ဆောင်ဆုမြတ်နိုးဦးက ပြောပါတယ်။ ”ကိုယ်တိုင်ကတော့ ရိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာ လုပ်ကွက်ရခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေအများကြီးရှိပေမယ့် အကယ်ဒမီကို ရင်ခုန်ရလောက်အောင်မရှိပါဘူး။ မျှော်လည်း မမျှော်ရဲသေးပါဘူး။ အကယ်ဒမီက အရမ်းလည်းနတ်ကြီးတယ်။ ကိုယ်တွေကအများကြီးကြိုးစားဖို့ လိုပါသေးတယ်”လို့ပြောပါတယ်။ အကယ်ဒမီရစေချင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ရှိတယ်လို့လည်း ဆုမြတ်နိုးဦးက အခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။
”အကယ်ဒမီပေးပွဲကလည်းနီးလာပြီဆိုတော့ ကိုယ်အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ကားထဲကမင်းသမီးတစ်ဦး၊ ကိုယ်တိုင်လည်း လေးစားအားကျရတဲ့ မအူဝဲ (သရုပ်ဆောင် အိန္ဒြာကျော်ဇင်)ကို ရစေချင်ပါတယ်။ ”ရင်ဘတ်ထဲကဓား”ဇာတ်ကားကို ကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကို မအူဝဲရဲ့ ကာရိုက်တာကပဲဆွဲခေါ်သွားတယ်။ အိုက်တင်တွေက အပိုအလိုမရှိပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် အစ်မကိုရစေချင်ပါတယ်။ မင်းသားတွေကတော့ အကုန်လုံးကကြိုးစားကြတာဆို တော့ ဘယ်သူပဲရရအားပေးနေမှာပါ” လို့ဆိုပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ဆုမြတ်နိုးဦးဟာ လက်ရှိမှာ ဒါရိုက်တာသြရသရိုက်ကူးတဲ့”ဇီးရိုးနှင့်ဟီးရိုး” ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာ သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦး၊ ညီထွဋ်ခေါင်တို့နဲ့အတူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး သူမကဇာတ်ကားများရိုက်ကူးရာမှာ သရုပ်ဆောင် ညီထွဋ်ခေါင်နဲ့ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်မှုများပြားပြီး တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ရတာအဆင်ပြေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ ”ကိုညီထွဋ်ခေါင်နဲ့ဇာတ်ကားတွေဇာတ်လမ်းတွဲတွေတော်တော်များများတွဲပြီးရိုက်ကူးဖူးပါတယ်။ မတွေဖူးတဲ့သူတို့ နောက် တစ်ကား နှစ်ကားလောက်ပဲတွဲရိုက်ဖူးတဲ့သူတွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ရတော့မယ်ဆိုရင် ရှိန်လည်းရှိန်ပါတယ်။ ကိုညီနဲ့ကျတော့ တော်တော်များများတွဲသရုပ်ဆောင်ဖူးတော့ အရမ်းကြီး အခက်အခဲတွေမရှိတော့ဘဲ ကိုညီကညီမဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်၊ ကိုယ်ကလည်း အဆင်ပြေသလိုပြန်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် သရုပ်ဆောင်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ နောက် ကိုညီတို့က အများကြီးသင်ပြပေး တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ တချို့ ဇာတ်ဝင် ခန်းတွေမှာ ရိုက်နေရင်းကနေ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်ပိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာမျိုး လေးတွေ ပြောတာတွေလည်းရှိပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆုမြတ်နိုးဦးက ဆက်လက်ပြီး”နောက် ဆက်ရိုက်မယ့်ဇာတ်ကားကတော့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုရိုက်ဖို့ပြောထားတာတော့ ရှိပါတယ်။ အတိအကျတော့မဖြစ်သေးပါဘူး။ ပြီးတော့ Online တစ်ခုအတွက်လည်း ပရိုဂရမ်တစ်ခုရိုက် ဖို့ပြောထားတာရှိပါတယ်။ နောက် မြဝတီရုပ်မြင် သံကြားမှာ တောက်လျှောက်ရိုက်ဖြစ်နေတာက တော့ Hello Lady ရယ်၊ ဟာသရုပ်စုံရယ်၊ အဲဒါ တွေကတော့ ရှေဆက်ပြီးတော့လည်း ရိုက်ဖြစ် သွားမှာပါ။ ကြားထဲမှာတော့ MTV လေး တွေရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်”လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
''ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ရတာကို စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့ မသတ်မှတ်ထားပါဘူး'' ဇာခြည်လင??
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၃၁)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအေ?
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ရေး အစီအစဉ်ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် ဘင်္ဂါလီအချို့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ